Duqeyn Diyaaradeed oo Ka Dhacday Gobolka Shabeelaha Hoose – Puntland Post
Posted on December 7, 2017 by Cowke
Wararka ka imaanaya Gobolka Shabeelaha hoose ayaa ku waramaya in diyaarado dagaal ay duqeeyeen deegaan ay maamulaan Al-shabaab.
Diyaaradaha ayaa duqeeyay deegaanka Ilimey oo qiyaastii 130 km (80 miles) kaga beegan dhanka Koonfurta Magaaladda Muqdisho ee Caasimadda Soomaliya.
Deegaanka la duqeeyay waxaa maamula dagaalyaanadda Al-shabaab.
Warar soo baxaya ayaa sheegaya in diyaaradaha ay bartilmaameedsadaeen gaari dagaal oo waday qalab lagu diyaarinay qaraxyo.
Gudoomiyaha Gobolka Shabelaha Hoose ee Dowladda Soomaliya Ali Nuur ayaa u sheegay wakaaladda wararka Reuters in diyaaradaha ay duqeeyeen gaari ay la socdeen Al-shabaab, balse uusan sheegi karin khasaaraha ka dhashay.
Dhanka kale Gudoomiyaha Gobolka Shabelaha Hoose ee Al-shabaab Mohamed Abu Usama ayaa beeniyay in diyaaradaha Mareykanka ay duqeeyaan gaari ay lahaayeen, Al-shabaab, taasi badalkeeda ayuu sheegay in la waxyeeleeyay dad shacab ahaa oo xoolo dhaqato u badnaa.
Waa duqeyntii 29-aad ee laga fuliyo gudaha Soomaliya, iyadoo Dowladda Mareykanka ay inta badan war kasoo saarto duqeymaha lagu qaado saldhigyadda dagaalyahanadda Daacish iyo Al-shabaab ay ku leeyihiin Gobolada dalka.
Garowe:- Issimo wada qorshe ay kaga hor-imanayaan doorashada Puntland
Wargaysyada Caalamka oo qoraya in Sucuudigu saaka Cadaysanayo Dilkii Wariyihii Qunsuliyadooda lagu dilay.
Barlamaanka Itoobiya oo cod Aqlabiyad ah ku Ansixiyay Wasirrada cusub ee Itoobiya
Akhirso:- Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya oo magacaabay Wasiiro cusub